Ciidanka NISA oo sheegay inay dileen Xubno katirsan Al-Shabaab – Radio Daljir
Ciidanka NISA oo sheegay inay dileen Xubno katirsan Al-Shabaab
Maajo 8, 2022 4:12 b 0
Ciidamada Nissa gaar ahaan kuwa hubeysan ee Duufaan ee ku sugan Gobolka Gedo ayaa la sheegay inay xubno katirsan Ururka Al-Shabaab oo isku dayay inay weerar jidgal ah ku sameeyaan ay ku dilay deegaanka Tuulo Barwaaqo oo u dhaxeeya magaalooyinka Garbahaarey iyo Baladxaawo.
Ciidamada oo kusii jeeday Beledxaawo ayaa saraakiisha hoggaamineyssy ay sheegeen inay ka warhayeen Abaabulka Al-Shabaab, taasi oo suura gelisay inay fashiliyaan , isla markaana ay ka hortagaan Xubnihii isku dayay weerarkaas.
Madaxa howlgalada Nissa ee Gobolka Gedo laba xidigle Xasan Aadan Maxmuud ayaa xaqiijiyay inay si nabad ah ku gaareen Degmada Beledxaawo oo ay ku wajahnaayeen.
Saraakiisha Ciidanka Duufaan ma sheegin tirada Xubnaha katirsan Ururka Al-Shabaab oo ay dileen, hayeeshee kaliya ay sheegeen inay ka hortageen weerarkii hidgalka ahaa oo ay kusoo qaadi lahaayeen.
Dhowr jeer ayaa Al-Shabaab waxaa ay weerar jidgal ah ku qaadeen Ciidamo katirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ku socdaalayay wadada u dhaxeeysa Magaalooyinka Garbahaareey iyo Beledxaawo ee Gobolka Gedo, waxaana weeraradaas ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
SAAKA & DUNIDA IYO MAXAMED IBRAAHIM GEELLE